🥇 Kaonty ho an'ny mpampita
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 62
Kaonty ho an'ny mpampita
Tandremo! Azonao atao ny misolo tena anay amin'ny firenenao!
Azonao atao ny mivarotra ny fandaharanay ary, raha ilaina, manitsy ny fandikana ireo programa.
Mandefasa anay amin'ny info@usu.kz
Lahatsary momba ny kaonty ho an'ny mpandefa
Manafatra kaonty ho an'ny mpampita
Ny lozisialy dia dingana sarotra sy maharitra, izay misy orinasa sy mpiara-miasa mifampitohy: mpanjifa, mpandraharaha amoron-dranomasina sy ranomasina, mpampita entana, mpitatitra, mpandraharaha lozisialy ary koa tompona fiara. Rehefa manome serivisy lozisialy dia ilaina ny manara-maso ny asan'ny tompon'andraikitra tsirairay mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny fitaterana. Ny kaonty ho an'ireo mpampita entana dia mamela anao handrafitra ny mombamomba ny mpanome tolotra sy handrindra ny asa miaraka amin'izy ireo, amin'ny fanomezana anjara biriky ny mangarahara amin'ny fizotran'ny lozisialy rehetra, ny famaritana ara-potoana ny lesoka ary ny fampandrosoana ny fepetra fanatsarana. Ny programa USU-Soft an'ny kaonty mandroso dia manome anao fitaovana isan-karazany hanatsarana ny fandaminana sy hahombiazan'ny orinasanao, ary koa handrindra ny fizotran'ny fitaterana rehetra ary hampivelatra ny fifandraisan'ny mpitatitra ary hampitombo ny fifaninanana.
Ny tombony lehibe sy ny maha samy hafa ny rindrambaiko sy ny programa 1C mahazatra dia tsy isalasalana fa ny mandeha ho azy ny asa sy ny fampiharana azy ireo eo noho eo. Ny kaonty amin'ny programa USU-Soft freight forwarder dia ahafahan'ny mpampiasa miditra, mitahiry ary manavao vaovao feno momba ny mpanome tolotra fitaterana, ao anatin'izany ny mombamomba ny fifandraisana, ny antontan-taratasy, ary koa ny hitazomana ny fandaharam-potoana fandoavam-bola sy ny fanaraha-maso ny fandoavana. Hankasitrahanao ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandaharanay momba ny kaonty mandroso sy ny rafitra hafa rehetra, satria ny rindrambaiko manana ny fahafaha-manao sy ny fahafaha-manao. Izy io koa dia manana interface interface, ary miaraka aminy no ahafahanao mankafy ny fanamorana ny fandidiana; Izy io dia mampifanaraka ny mombamomba ny orinasa ary manana firafitra tsotra sy takatry ny saina misy ny sakana telo. Ny fizarana Directories dia angon-drakitra iray izay ampidirina ny fampahalalana rehefa manao asa asa amin'ny maody mandeha ho azy. Ny fizarana Modules dia sehatr'asa ahafahan'ireo manampahaizana manokana mamorona fangatahana fitaterana sy mividy singa ilaina, manamboatra làlana ary mikajiana sidina, ary koa manara-maso ny lalan'ny fizarana tsirairay amin'ilay zotra. Ny sakana Reports dia ahafahanao mamorona sy misintona tatitra ara-bola sy fitantanana isan-karazany mandritra ny fotoana voafaritra. Ny ambaratongam-pahefana toy izany dia mazava kokoa sy mora kokoa noho ny manao kaonty ireo mpampita entana amin'ny programa 1C.
Ankoatr'izay, ny asan'ny sampana rehetra dia ampifanarahana amin'ny loharano iray. Ireo mpitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia afaka mitazona tahiry ho an'ny mpanjifa, mampiasa azy handefa mailaka ary hanara-maso ny fahombiazan'ny doka. Ny sampan-draharaha misahana ny lozisialy dia mamorona fangatahana hanombohana ny fizotry ny fitaterana sy hanamboatra ny kajy ilaina. Ny sampan-draharahan'ny fitaterana dia afaka manara-maso ny toetoetran'ny fitaovana sy mifehy ny fahavitan'ny fikojakojana ara-potoana ny fiara fitaterana manontolo. Ireo mpandrindra dia afaka manara-maso sy manamarika ny fomba hanatanterahana ny dingana tsirairay amin'ny fitaterana ataon'ny mpampandroso. Ny fitantanana ambony dia mandray fitaovana ho an'ny fifehezana ny asan'ny sampana rehetra ary koa handinihana ireo angona azo mba hampivelarana ny fepetra amin'ny fanatsarana ny asa aman-draharaha. Ny kaonty ho an'ireo mpampita entana dia mamela anao hanafoana ireo ora tsy ampoizina, fijanonana ary fandaniam-bola, ary koa manova lalana mora ary manome torolàlana vaovao raha ilaina. Ny serivisy ho an'ny fifandraisana haingana amin'ireo mpitatitra amin'ny alàlan'ny telefaona, SMS ary hafatra mailaka dia misy ihany koa, izay manavaka ny lozisainay indray. Ny kaonty amin'ny serivisy ho an'ny mpitatitra entana dia ahafahanao manoratra ny tena vola lanin'ny mpamily tsirairay avy ary manampy amin'izany amin'ny fanisana marina ny vola aloan'ny mpanjifa tsirairay, amin'ny fiheverana ny fandaniana rehetra.
Ny fanombanana ny fandraisana anjaran'ny sampana tompon'andraikitra tsirairay dia azo atao amin'ny alàlan'ny fangatahana kaonty, ary koa ny famakafakana ny fotoana laniana amin'ny fankatoavana sy ny fanatsarana ny fandaminana asa. Ny fampahalalana natambatra amin'ny sampana rehetra sy ny fizarazaran'ny orinasa dia angonina ara-potoana, ary koa ny angon-drakitra momba ny serivisy serivisy rehetra sy ny trano fanatobiana entana. Manolotra anao rafi-kaonty mahasoa ho an'ny mpanampy na amin'ny orinasa lehibe na amin'ny orinasa kely noho ny fahafaha-mametraka. Rehefa mila manao asa ny mpiasanao dia mahazo fampandrenesana izy amin'izany. Ny antontan-taratasy rehetra dia novokarina ho azy, toy ny fankatoavana amin'ny fitaterana, taratasy firaketana ny fiara, ary taratasy fikojakojana. Ny rafitry ny kaonty ho an'ireo mpampandroso dia mahatonga ny fizotrany rehetra ho tsotra sy haingana, amin'ny alàlan'ny kaonty solika navoaka ho an'ny mpamily, ny fenitry ny fanjifana solika, ny mileage nomanina, ny fanoloana ranon-javatra sy ny faritra sanda. Ny mampiavaka ny programa fitantanam-bola ho an'ireo mpampandroso dia ny fahaizana manamboatra fandaharam-potoana isan-kerinandro amin'ny fandefasana sy ny famoahana entana ao anatin'ny tontolon'ny mpanjifa, ny mpandefa, ny zotra, ny toerana fiaingana sy ny toerana itodiana. Drafitra miasa amin'ny antsipiriany sy hita maso isaky ny sidina no aseho amin'ny mpampiasa tsirairay: iza no nandidy ny fitaterana, ny fahavononan'ny fiara, ny toerana fandefasana sy ny fandefasana, izay manaiky ny entana, na efa nisy ny fandoavana sns.
Misaotra ny fampiharana dia mifehy ny tapakila fandoavam-bola, vola mivoaka ary fitantanana trosa ianao. Ny fanaovana analytics ara-bola feno dia mora noho ny tatitra momba ny fahasarotana isan-karazany, ny fampisehoana tahirin-kevitra amin'ny endrika kisary sy ny kisarisary eo amin'ny sehatry ny sehatry ny asa, ny fiara, ny vidiny, sns. ny asan'ny orinasa. Raha ny momba ny fampidirana endri-javatra, ny rindrambaiko dia azo ampidirina amin'ny tranokalan'ny fikambanana misy anao. Raha te-hanombatombana ny zava-bitan'ny mpiasa tsirairay ianao, dia manaraha-maso ny mpiasa miaraka amin'ny rindrambaiko, ary mitadiava manam-pahaizana manokana ao amin'ny fikambanana misy anao. Mamolavola fifandraisana amin'ny mpanjifa ary mitazona angon-drakitra CRM feno, ary koa fanadihadiana momba ny fahombiazan'ny mpitantana ny mpanjifa. Ny fahaizana mitahiry ny môdely ho an'ny fifanarahana sy antontan-taratasy hafa dia manamora sy manafaingana ny fizotry ny famoronana sy fanaovana sonia fifanarahana.
Logistics sy fitaterana
Kaonty sy fanaraha-maso ny fitaterana
Kaonty sy fandaminana fitaterana
Kaonty ho an'ny logistianina
Kaonty ho an'ireo mpampita hafatra
Kaonty ho an'ny mpandefa
Kaonty amin'ny famoahana ny lalana
Kaonty amin'ny fanomezana serivisy fitaterana
Kaonty amin'ny lojika
Kaonty amin'ny kaompaniam-pitaterana
Kaonty ao amin'ny fikambanana fitaterana
Kaonty fitaterana fiara
Kaonty amin'ny orinasam-pitaterana fiara
Kaonty amin'ny orinasam-pitaterana
Kaonty fitaterana entana
Kaonty amin'ny fitaterana entana
Kaonty amin'ny serivisy fanaterana
Kaonty amin'ny serivisy fandefasana entana
Kaonty ny fiara mpitatitra entana
Kaonty amin'ny famatsiana entana
Kaonty amin'ny fitaterana iraisam-pirenena
Kaonty fitaterana mpandeha
Kaonty amin'ny fangatahana fitaterana
Kaonty amin'ny serivisy fitaterana
Kaonty amin'ny famatsiana
Kaonty amin'ny fanamafisana
Kaonty amin'ny fitaterana
Kaonty fitaterana sy fanaterana
Kaonty amin'ny fitaterana fitaterana
Kaonty ny fiara sy ny mpamily
Kaonty amin'ny sarety
Kaonty amin'ny asa fitaterana
Rafitra kaonty ho an'ny lozisialy
Diary momba ny fiara fitaterana kaonty
Famakafakana hetsika ho an'ny orinasam-pitaterana fiara
Fanadihadiana momba ny orinasam-pitaterana fiara
fanadihadiana ny orinasam-pitaterana
Famakafakana ny vidin'ny fitaterana
Fanadihadiana momba ny orinasam-pitaterana
Fanadihadiana momba ny asa fitaterana
Fampiharana amin'ny fitaterana fiara
App ho an'ny orinasam-pitaterana
App ho an'ny famatsiana
Rafitra fitantanana mandeha ho azy
Automation ho an'ny serivisy mpampita hafatra
Fanamboarana automatique ny kaonty entana
Automation ny fitaterana
Automation ny fitantanana fitaterana
Rafitra mandeha ho azy ho an'ny fitaterana
Kaonty amin'ny fiara
Kaonty amin'ny fiaramanidina Auto
Fanaraha-maso ny fiaramanidina Auto
Fitantanana fiaramanidina fiara
Fanaraha-maso ny fandefasana kargo
Rafitra fanaterana kargo
Fanaraha-maso ny hetsika kargo
Kaonty momba ny entana
Rafitra fanaraha-maso entana
Fanaraha-maso ny fandefasana entana
Fitantanana fandefasana entana
Rafitra fitantanana entana
Fanaraha-maso ny fitaterana entana
Fitantanana fitaterana entana
Rafitra fitaterana entana
Latabatra fitaterana entana
Fandaharana fitaterana entana
Fanaraha-maso ny fiara
Fitantanana logistika ara-barotra
Fitantanana logistikan'ny orinasa
Fitantanana fandefasana kaontenera
Fanaraha-maso sy fitantarana ny fitaterana fiara
Fanaraha-maso ny orinasam-pitaterana fiara
Fanaraha-maso ny fitaterana fiara fitaterana fiara
Fanaraha-maso ny orinasam-pitaterana
Fanaraha-maso ny ora fanaterana
Fanaraha-maso ny mpamily
Fanaraha-maso ny lojika
Fanaraha-maso ny famatsiana
Fanaraha-maso ny fanatanterahana ny famatsiana
Fanaraha-maso ny fifanarahana famatsiana
Fanaraha-maso ny fitaterana
Fanaraha-maso ny fitaterana ny mpandeha
Fanaraha-maso ny serivisy fitaterana
Fanaraha-maso ny fitaterana fitaterana
Fanaraha-maso ny sarety
Fanaraha-maso ny fitaterana fiara
Fanaraha-maso ny fitaterana iraisam-pirenena
Fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fitaterana
Rafitra fanaraha-maso ho an'ny fitaterana fiara
Rafitra fanaraha-maso amin'ny lozisialy
Rafitra Crm amin'ny logistika
Fanaterana mandeha ho azy
Fanaraha-maso ny fandefasana
Rafitra fitantanana fandefasana
Fandrefesana solika diesel
Fandefasana fitaterana ny fitaterana
Sintomy ny programa momba ny fitaterana entana
Fitantanana logistika mahomby
Erp rafitra amin'ny lozisialy
Kaonty amin'ny sidina
Kaonty amin'ny solika
Fanaraha-maso ny fanjifana solika
Rafitra fanaraha-maso solika
Kaonty fanaterana entana
Fanaraha-maso fanaterana entana
Fitantanana ny fandefasana entana
Fandaharana fanaterana entana
Rafitra fanaterana entana
Fitantanana ny famatsiana entana
Mampitombo ny fahombiazan'ny orinasam-pitaterana
Fitantanana ny fikorianan'ny fampahalalam-baovao
Rafitra fampahalalana amin'ny logistika
Rafitra fampahalalana momba ny fitantanana fitaterana
Rafitra fampahalalana ho an'ny fitantanana fitaterana
Diary momba ny fitaterana ny fitaterana fiara
Gazety momba ny kaonty ny fiaingan'ny fitaterana fiara
Boky ho an'ny kaonty fitaterana
Logistics sy fitantanana ny famatsiana
Logistics sy fitantanana ny rojo famatsiana
Logistics sy fitantanana ny fitaterana
Logistics sy fitantanana ny trano fanatobiana entana
Fitantanana lozisialy ny famatsiana
Fandaharana fitantanana lojika
Rafitra fitantanana lojika
Logistikan'ny fitaterana fitaterana
Fitantanana orinasa fitaterana fiara
Fitantanana ny fitaterana fiara
Fitantanana serivisy lozisialy
Fitantanana orinasa fitaterana
Fitantanana ny fitaterana entana
Fitantanana ny fitaterana iraisam-pirenena
Fitantanana ny fitaterana mpandeha
Fitantanana ny fitaterana an-dalamby
Fitantanana ny fitaterana an-dranomasina
Fitantanana ny rojo famatsiana
Fitantanana ny fizotry ny famatsiana
Fitantanana ny departemanta lozisialy
Fitantanana ny fitaterana
Fitantanana ny fitaterana amin'ny fitaterana an-dàlana
Fitantanana ny serivisy fitaterana
Fitantanana ny fitaterana fitaterana
Rafitra fitantanana fitaterana
Rafitra fitantanana fitaterana fitaterana
Fanatsarana ny serivisy fanaterana
Fanatsarana ny lozisialy
Fanatsarana ny fitaterana
Fitantanana baiko amin'ny lojika
Fandaminana sy fitantanana fitaterana
Fikambanana sy fitantanana fitaterana fitaterana
Fitantanana logistikan'ny fikambanana
Fikambanan'ny kaonty fitaterana
Fandaminana ny kaonty fitaterana entana
Fandaminana fitaterana entana
Fikambanana fitantanana ny famatsiana
Fandaminana fitaterana entana amin'ny arabe
Fandaminana ny rafitra fandefasana
Fandaminana fitaterana entana sy mpandeha
Fikambanana fitaterana sy fitantanana amin'ny fitaterana an-dàlana
Fikambanana fitantanana fitaterana
Fandrindrana ny kaontin'ny fiara
Fandaminana ny asan'ny orinasam-pitaterana fiara
Fandaminana ny asan'ny orinasam-pitaterana
Fandaminana ny asa fitaterana
Fitantanana mpiasa amin'ny lojika
Drafitra sy fitantanana fitaterana
Rafitra fananganana logistics
Fitantanana ny famatsiana vokatra
Fandaharana ho an'ny kaonty fitaterana
Programme ho an'ny fitantanana fitaterana fiara
Fandaharana ho an'ny kaonty fitaterana entana
Fandaharana ho an'ny sarety fitaterana kaonty
Fandaharam-pianarana ho an'ny lalana fitantanana kaonty
Fandaharana ho an'ny orinasam-pitaterana fiara
Fandaharana ho an'ny fitaterana fiara
Fandaharana ho an'ny kaonty fitaterana fiara
Programa ho an'ny orinasam-pitaterana
Fandaharana ho an'ny entana
Fandaharana ho an'ny fitaterana entana
Fandaharam-potoana hamoronana sidina
Fandaharana ho an'ny famenoana waybills
Fandaharam-potoana ho an'ny sidina
Fandaharana ho an'ny fitaterana iraisam-pirenena
Fandaharam-potoana ho an'ny logistianina
Fandaharana ho an'ny fitaterana mpandeha
Fandaharana ho an'ny famatsiana
Fandaharana ho an'ny fiaramanidina fiara
Fandaharana ho an'ny kaonty amin'ny fiara
Fandaharana ho an'ny fanamafisana
Fandaharam-potoana ho an'ireo mpampita hafatra
Fandaharana ho an'ny serivisy mpampita hafatra
Fandaharana ho an'ny fandefasana
Fandaharana ho an'ny serivisy fanaterana
Fandaharam-potoana ho an'ny mpandefa
Fandaharam-potoana ho an'ny mpampita
Fandaharana ho an'ny solika
Fandaharana ho an'ny mpandefa fitaterana an-dàlana
Fandaharana ho an'ny fitaterana
Fandaharana ho an'ny mpandefa fitaterana
Fandaharana ho an'ny fikambanana fitaterana
Fandaharana ho an'ny antontan-taratasy fitaterana
Fandaharana ho an'ny lozisialy fitaterana
Fandaharana ho an'ny serivisy fitaterana
Fandaharana ho an'ny fiara
Fandaharam-potoana ho an'ny waybills
Fandaharam-bola amin'ny kaonty fitaterana
Fandaharana fitantanana fitaterana
Fandaharam-potoana amin'ny kajy fitaterana
Trano fisoratana anarana amin'ny fitaterana fiara
Tatitry ny orinasam-pitaterana fiara
Fitantanana fitaterana an-dàlana
Fampiharana rindrambaiko ho an'ny fitaterana entana
Rindrambaiko ho an'ny fitaterana
Rafitra fanaraha-maso sy fitantanana ny fanaraha-maso
Rafitra fanaraha-maso mpanara-maso
Rafitra fitantanana kaonty
Fanomezana mandeha ho azy
Rafitra fanaraha-maso famatsiana
Fitantanana ny famatsiana
Fandaharana fitantanana famatsiana
Rafitra fitantanana famatsiana
Rafitra ho an'ny orinasam-pitaterana fiara
Rafitra fitaterana fiara
Rafitra ho an'ny orinasam-pitaterana
Rafitra fanaraha-maso ny fiara
Rafitra ho an'ny lojika
Rafitra ho an'ireo mpampita hafatra
Rafitra ho an'ny serivisy fanaterana
Rafitra ho an'ny mpampita
Rafitra ho an'ny fitaterana
Rafitra ho an'ny antontan-taratasy fitaterana
Rafitra fitaterana fitaterana
Rafitra fitaterana ny mpandeha
Takelaka ho an'ny fitaterana fiara
Lisitry ny entana nafindra
Fitaterana sy fitantanana fitaterana
Latabatra amin'ny fitaterana
Fanaraha-maso ny fitaterana sy ny fitehirizana
Rafitra fandaminana fitaterana
Automation an'ny orinasam-pitaterana
Rafitra fanaraha-maso ny fitaterana
Rafitra fitantanana orinasa fitaterana
Automation logistics fitaterana
Fitantanana logistik fitaterana
Rafitra fitantanana logistik fitaterana
Rafitra logistik fitaterana
Fitantanana fitaterana ao amin'ny orinasa
Fandaharana fitaterana ho an'ny solosaina
Fampiharana serivisy fitaterana
Karatra fitaterana fiara
Kaonty amin'ny fifamoivoizana fiara
Kaonty amin'ny fampiasana fiara
Diary momba ny kaonty Waybills
Fisoratana anarana Waybill